ဒုတိယမွောကျရငျခုနျသံ – My Blog
ကမြနာမညျကမနှေငျးမို့ပါ။ကမြကအိမျထောငျသညျမိနျးမတယောကျပါ။ယောကျြားကနယျမှာအလုပျလုပျနတေော့ အတူသိပျမနဖွေဈဘူးလေ။ အိမျမှာနေ ရငျးပငျြးလာတော့အငျတာနကျသုံးရငျးအပငျြးဖွတောပေါ့။တနလေို့ငျးသုံးရငျးမကျဆငျဂြာမှာလာပွောတဲ့သူတယောကျနဲ့ပွောဖွဈတယျလေ။ သူကတခွား သူမဟုတျပါဘူး။ကမြတို့မွို့ကကိုမိုကျကယျပေါ့။ လိုငျးသုံးဖွဈတိုငျးပွောဖွဈတော့ ကမြစိတျထဲမှာတမြိုးပဲလေ။ သူကလညျးသာကွောငျးမာကွောငျးပွော ရငျး တဖွေးဖွေးသာယာလာမိတယျ။ ကမြကအိအျထောငျသညျဆိုပမေယျ့ဘျောဒီကိုထိနျးပါတယျ။၃၄ ၂၇ ၃၉ ကနေ မကအြောငျလေ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုမိုကျကယျနဲ့ ကမြ လိုငျးပျေါကနေ ပွောရတာကိုသာယာမိလာပါတယျ။
သူကလညျးကမြပုံလေးတှကေို သိမျးထားတယျလကေမြမသိအောငျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့တနမှေ့ာကိုမိုကျကယျက အပွငျမှာတှဖေို့ပွောလာပါတယျ။ ကမြလဲနဲနဲမူလို ကျပီးလကျခံလိုကျပါတဟျ။ အိမျကိုသူငယျခငျြးတယောကျဆီသှားမယျအေဲာငျးပွပီးထှကျလာခဲ့တယျ။ အစကတော့လူခငျြးတှပေီ့း မုနျ့စား စကားပွောပီး ပွနျဖို့ပေါ့။. ကိမိုကျကယျကအခြိုရညျထဲဘာထညျ့လိုကျဠဲမသိဘူး။ ကမြမကျြလုံးတှစေငျးလာပီး ပိပိလေးကတအားယှလာတယျလေ။ကိုမိုကျကယျကကြ မကိုတှဲပီးဟိုတယျခနျးထဲချေါလာတာပါပဲ။
သူက ကြှနျမကို အိပျယာပျေါကို တှနျးလှဲလိုကျသညျ။ ကြှနျမ ကိုယျပျေါမှာ အနကျရောငျအတှငျးခံ ဝမျးဆကျ လေးကလှဲ ပွီး ဘာမှမကနျြတော့ ။ သူ့ကိုယျပျေါ မှာလဲ အားကစားဘောငျးဘီတိုလေးတဈထညျတညျး ဝတျထားတော့သညျ။ သူက ကြှနျမလညျတိုငျကို ဖှဖှ နမျးရငျ bra ခြိတျကိုဖွုတျလိုကျသညျ။ ဖွူဖှေး ဝငျးမှတျပွီး ဆူဖွိုးလှတဲ့ကြှနျမရငျသားတှကေ အကာအကှယျမဲ့ ပျေါလာသညျ။ သူ့လကျတဈဖကျက ကြှနျမနို့အုံကွီးတဈဖကျကို ဆုပျနယျရငျး နို့သီးခေါငျး ခြှနျခြှနျလေးကို ငုံစို့လိုကျသညျ။ နောကျလကျတဈဖကျက ကြှနျမ ဝမျးဗိုကျပျေါပှတျသပျရငျး အောကျကို ဆငျးသှားသညျ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးနား ရောကျလာသညျ။
ဘောငျးဘီအောကျထဲ လကျကို နှိုကျလိုကျသညျ။ လကျခြောငျးလေး နှဈခြောငျးနှငျ့ ကြှနျမရဲ့အကှဲကွောငျးလေး တဈလြှောကျပှတျသပျရငျး အပေါကျထဲကို ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ ထိုးလိုကျသှငျးလိုကျ မှနျမှနျလေးလုပျပေးနရေငျး ကြှနျမ အဖုတျကစိုရှဲ လာပွီး ခဏကွာတော့ ပွီးသှားသညျ။ ” မို့လေး ပီးသှားတဲ့ပုံစံ လေးက သိပျခဈြဖို့ကောငျးတာပဲ “ ကြှနျမက တအငျးအငျး ညညျးရငျ သူ့ရဲ့ဘောငျးဘီတိုကို ခြှတျပေးလိုကျသညျ။ သူကလဲ ကြှနျမအတှငျးခံဘောငျးဘီလေး ကို ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ကြှနျမပေါငျနှဈဖကျကွားမှာနရော ယူပွီး သူ့ဟာကွီးကို ကြှနျမ အဖုတျထဲကို ထိုးသှငျးလိုကျလသေညျ။ ပထမတော့ ဖွေးဖွေးခငျြး အသှငျးအထုတျလုပျနသေညျ။ ခဏကွာတော့ ပိုမွနျလာပွီး ဆောငျ့ခကျြတှကေအားပါလာသညျ။ သူဒုတျကွီးကကြှနျမ အဖုတျကွီးထဲ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ လှုပျရှားနသေညျ။ သူညညျးတဲ့ အသံ ကြှနျမ ညညျးတဲ့အသံ အသှငျးအထုတျလုပျရငျးထှကျလာတဲ့ တဖုတျဖုတျ တဖကျဖကျ အသံတှေ ဆူညံနသေညျ။
သူက ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ပေးနသေညျ။ ခံရတဲ့ ကြှနျမက အီဆိမျ့နအေောငျ အရသာရှိလှသညျ။ ” … ပွငျးပွငျးအိုးးမောငျ ပွငျးပွငျးလေးဆောငျ့ … အငျးး အငျး “ သူ့ဟာကွီးကို ကြှနျမထဲ တဆုံးဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ကြှနျမ အသကျရှူတှမှေားလာသညျ။ ခေါငျးကိုနောကျကို လှနျခပြွီး ခါးကိုကော့ကာ အမောတကောပွောသညျ။ “ထိုးထညျ့လိုကျစမျးပါ … မောငျ့ဟာကွီးကို ကြှနျမထဲ ပွငျးပွငျးထိုထညျ့ပေးစမျးပါ” ကြှနျမက အသအေျောနသေညျ။ သူက သူ့ဟာကွီးကို ပွနျထုတျလိုကျသညျ။ သူ့မကျြနှာကို ကြှနျမပါငျကွားထဲအပျလိုကျသညျ။
ကြှနျမရဲ့ စိုရှဲနတေဲ့အဖုတျအကှဲကွောငျးတလြှောကျ သူ့ရဲ့လြှာနဲ့လကျြပေးသညျ။ကြှနျမက သူ့ခေါငျးကိုပေါငျကွားထဲအတငျးဖိခသြညျ။ သူက ကြှနျမပေါငျနှဈ ဖကျကို ဘေးကို တှနျးကားလိုကျပွီး ကြှနျမအစိလေးကိုနှုတျခမျးနဲ့ဆှဲစုပျရငျး လကျခြောငျးနဲ့ အဖုတျထဲအသှငျးအထုတျလုပျပေးသညျ။ ခပျမွနျမွနျ ခပျပွငျး ပွငျးထိုးထိုးထညျ့သညျ။ ခဏကွာတော့ သူ့လကျခြောငျးကို တှနျးဖယျလိုကျပွီး နောကျတဈခေါကျပွီးသှားပွနျသညျ။ ကြှနျမအဖုတျကွီးတဈခုလုံး ပူနှေးစိုရှဲ နသေလိုခံစားရသညျ။ သူက ကြှနျမကို ဆှဲ မှောကျလိုကျသညျ။ ကြှနျမ ဖငျနှဈဖကျကိုဆှဲဖွဲပွီး သူ့ဒုတျကွိးကို ကြှနျမ ဖငျပေါကျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျပွနျသညျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမနောကျကြောပျေါ မှောကျခလြိုကျပွီး ကြှနျမနို့အုံကွီးနှဈဖကျကို ဆုပျနယျနသေညျ။ သူဒုတျက ကြှနိမဖငျထဲကို တအားဆောငျ့ပေးနသေညျ။
ကြှနျမက တအငျးအငျး အျောဟဈနသေညျ။ ကြှနျမဖငျထဲက သူ့ဒုတျကွီး ကိုထုတျလိုကျသညျ။ ကြှနျမက လှညျ့ပွီး သူ့ကို အိပျယာပျေါဆှဲလှဲလိုကျသညျ။ သူက ကြှနျမကို အဓိပ်ပါယျပါပါပွုံးပွသညျ။ ကြှနျမ ဘာလုပျမလဲဆိုတာ သူသိသညျ။ ကြှနျမက သူ့မကျြနှာပျေါပွောငျးပွနျတကျခှလိုကျသညျ။ ကြှနျမအဖုတျ ကွီးကို သူ့မကျြနှာပျေါဖိခလြိုကျသညျ။ ကြှနျမ နှုတျခမျးက သူ့ဒုတျကွီးရဲ့ထိပျကို ငုံလိုကျသညျ။
သူက ကြှနျမ အဖုတျတလြှောကျလကျြပေးပွီး နှုတျခမျးသားတှကေို ဆှဲစုပျပေးပွနျသညျ။ သူ့ဒုတျကွီးကို ကြှနျမပါးစပျနဲ့ တပွှတျပွှတျမွညျအောငျ အသှငျးအ ထုတျလုပျပေးနသေညျ။ ပါးစပျတှေ ထူပူပွီး အာတှညေောငျးလာသညျ့တိုငျအောငျသူ့ဟာကွီးကိုစုပျပေးရတာ မရပျခငျြလောကျအောငျအရသာရှိလှသညျ။ သူက ကြှနျမကို အိပျယာပျေါပွနျဆှဲလှဲလိုကျသညျ။ သူကအပျေါကပွနျရောကျသှားပွီ။ သူ့ဒုတျကွီးကို ကြှနျမရဲ့ပူနှေးစိုရှဲနတေဲ့ အဖုတျကွီးထဲ ပွနျထိုးထညျ့ ပွနျသညျ။ နကျသထကျနကျအောငျ မွနျသထကျမွနျအောငျ ပွငျးသထကျပွငျးအောငျဆောငျ့ပေးနသေညျ။ အဖုတျထဲက နာကငျြနပေမေဲ့ ရပျခငျြစိတျမရှိ။ အသံကုနျသာအျောဟဈ ညညျးညူနသေညျ။
“အိုးး .. မို့ကို စိတျကွိုကျလုပျ .. စိတျကွိုကျသာလိုးစမျးပါ “ နာကငျြနလေကျြကပငျ တအားကောငျးနသေညျ။ သူက အားကုနျဆောငျ့ပေးနသေောကွောငျ့ ခုတငျကွီးတဈခုလုံး လှုပျခါနသေညျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျအောကျတှငျ ခုတငျကွီး တဒုနျး ဒုနျးမွညျနသေညျကိုကွားရသညျ။ သူ့ဒုတျကွီးက ကြှနျမ အဖုတျ ထဲ ထညျ့ထားရကျနှငျ့ သူကကြှနိမကိုဆှဲထူပွီး မတျတပျရပျလိုကျသညျ။ ကြှနျမထဲက ဆှဲထုတျလိုကျပွီး ကြှနျမကိုဆှဲလှညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမဖငျ ပေါကျထဲ ပွနျထိုးထညျ့သညျ။ ကြှနျမကို မတျတပျရပျလကျြ ဖငျလိုးနသေညျ။ ကြှနျမက အားမလိုအားမရနှငျ့ ဖငျကို ကုနျးပေးသညျ။ “ပွငျးပွငျးဆောငျ့ “ သူက ကြှနျမပွောလိုကျတာနဲ့ မီးကုနျယမျးကုနျဆောငျ့တော့သညျ။ နှဈယောကျလုံး ကနြေပျအားရစှာ အျောဟဈနသေညျ။ သူက ကြှနျမကို ခုတငျပျေါကို ပဈ တငျလိုကျသညျ။
ကြှနျမက ခုတငျပျေါကိုမှောကျရကျကသြှားသညျ။ ကြှနျမ နို့နှဈလုံးက အိပျယာဘေးကိုလြှံထှကျနသေညျ။ သူက ကွုံဖူးသမြှထဲမှာ အမွနျဆုံးနှုနျးနဲ့ ကြှနျမကို ဆောငျ့ပေးနသေညျ။ ခဏကွာတော့ သူနှေးသှားသညျ သူပွီးသှားပွီထငျလို့ ကြှနျမစိတျပကျြသှားသညျ။ ဒါပမေဲ့ အံ့သွစရာကောငျးလောကျအောငျပငျ ကြှနျမကို ပွနျဆှဲလှညျ့ပွီး အဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ပွနျသညျ။ တခကျြတညျး အားကုနျအဆုံးထိထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ တဈသကျနှငျ့တဈကိုယျ တခါမှဒီလောကျမ နာဖူး .. ဒီလောကျကောငျးတာလဲတခါမှမကွုံဖူး … သူက ပွငျးပွငျး မွနျမွနျဆောငျ့နပွေနျသညျ။ ကြှနျမခေါငျးကနောကျကို လနျနပွေီး အသကျကိုမနညျးရှူ နရေသညျ။သူက နောကျဆုံး တရစကျဆောငျ့ရငျး ကြှနျမအဖုတျထဲကို ပူနှေးပဈြခြှဲတဲ့သုတျရညျတှေ ပွညျ့လြှံနအေောငျ ပနျးထုတျလိုကျလသေညျ။
ပွီးတော့ သူ့ဒုတျကွီးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွနျဆှဲထုတျသှားသညျ။ သူက ကြှနျမခွထေောကျနှဈခြောငျးကိုဆှဲပွီး ခုတငျပျေါကတှဲလောငျးခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ငုံ့လိုကျပွီး သုတျရညျတှပေပှေနတေဲ့ အဖုတျကွီးကို လြှာနဲ့ ပွောငျအောငျလကျြပေးပွနျသညျ။ သူ့လြှာနဲ့ အဖုတျထဲကို သှငျးလိုကျထုတျလိုကျလုပျ ပေးသညျ။ ကြှနျမက သူ့ဆံပငျကိုဆှဲဆုပျပွီး သူ့မကျြနှာကို ကြှနျမအဖုတျနှငျ့ ရှတေို့းနောကျဆုတျပှတျနသေညျ။ အဖုတျတခုလုံး ထူပူကြိနျးစပျနာကငျြနသေျောလညျး မကွုံဖူးအောငျ ကောငျးတဲ့အရသာကွောငျ့ သာယာကနြေပျစှာ တီးတိုးညညျးနသေညျ။
ဘယျလောကျကွာသှားမှနျးမသိ .. သူ့မကျြနှာကို ကြှနျမအဖုတျဆီက ဖယျလိုကျသညျ။ သူက အရညျတှထေုတျပွီးလို့ပြော့သှားတဲ့သူ့ဒုတျကွီးကို ကြှနျမမကျြနှာဆီကပျလာပေးသညျ။ ကြှနျမက အလိုကျသိစှာ အရညျတှပေပှေနတေဲ့ ဒုတျကွီးကိုငုံစုပျပေးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ တှဲလောငျးကနြတေဲ့ ဥနှဈလုံးကို လဲ တဈလှညျ့စီ ငုံစုပျပေးသညျ။ စုပျပေးနရေငျး ခဏကွာတော့ သူ့ဒုတျကွီးက သံခြောငျးကွီးလိုပွနျပွီး မာတောငျ့လာပွနျသညျ။ နောကျတခါအတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီ … သူ့ဒုတျကွီးကို ကြှနျမပါးစပျထဲကထုတျလိုကျသညျ။ ကြှနျမတံတှေးတှကွေောငျ့ ပွောငျလကျနသေညျ။ သူက ကြှနျမခွနှေဈခြောငျး ကို ဆှဲကားလိုကျပွီး သူ့ဒုတျကွီးကို ကြှနျမအဖုတျကွီးမှာတကေ့ာ ဆောငျ့ခလြိုကိပွနျသညျ။ အခနျးထဲမှာ ကြှနျမတို့နှဈယောကျအသံတှေ ပွနျပွီးဆူညံသှားပွနျလတေော့သညျ ။
ကမြအိပျရာနိူးတော့အရာရာတိုငျးဟာအိမျမကျ အိမျမကျမဟုတျတာတော့သခြောတဟိလေ။ ကမြဘေးမှာအိပျမောကနြတေဲ့ကိုမိုကျကယျ ပီးတော့ကမြပိပိ လေး ထဲကအနျကနြတေဲ့ သုကျရညျတှရေယျတှလေို့ကျရလို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့မကွာခဏခိုးတှရေ့ငျး ကာမအရသာကိုအတူခံစားခဲ့တယျလေ။ ရလဒျကတော့အခု ကမြ မှာကိုမိုကျကယျ့ကိုယျဝနျရှိနပေီလေ။ဒါကွောငျ့ အားလုံးအဆငျပွဖေို့ ကမြယောကျြားဆီလိုကျပီး
ကျမနာမည်ကမေနှင်းမို့ပါ။ကျမကအိမ်ထောင်သည်မိန်းမတယောက်ပါ။ယောက်ျားကနယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတော့ အတူသိပ်မနေဖြစ်ဘူးလေ။ အိမ်မှာနေ ရင်းပျင်းလာတော့အင်တာနက်သုံးရင်းအပျင်းဖြေတာပေါ့။တနေ့လိုင်းသုံးရင်းမက်ဆင်ဂျာမှာလာပြောတဲ့သူတယောက်နဲ့ပြောဖြစ်တယ်လေ။ သူကတခြား သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မြို့ကကိုမိုက်ကယ်ပေါ့။ လိုင်းသုံးဖြစ်တိုင်းပြောဖြစ်တော့ ကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲလေ။ သူကလည်းသာကြောင်းမာကြောင်းပြော ရင်း တဖြေးဖြေးသာယာလာမိတယ်။ ကျမကအိအ်ထောင်သည်ဆိုပေမယ့်ဘော်ဒီကိုထိန်းပါတယ်။၃၄ ၂၇ ၃၉ ကနေ မကျအောင်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုမိုက်ကယ်နဲ့ ကျမ လိုင်းပေါ်ကနေ ပြောရတာကိုသာယာမိလာပါတယ်။
သူကလည်းကျမပုံလေးတွေကို သိမ်းထားတယ်လေကျမမသိအောင်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာကိုမိုက်ကယ်က အပြင်မှာတွေ့ဖို့ပြောလာပါတယ်။ ကျမလဲနဲနဲမူလို က်ပီးလက်ခံလိုက်ပါတဟ်။ အိမ်ကိုသူငယ်ချင်းတယောက်ဆီသွားမယ်အေဲာင်းပြပီးထွက်လာခဲ့တယ်။ အစကတော့လူချင်းတွေ့ပီး မုန့်စား စကားပြောပီး ပြန်ဖို့ပေါ့။. ကိမိုက်ကယ်ကအချိုရည်ထဲဘာထည့်လိုက်ဠဲမသိဘူး။ ကျမမျက်လုံးတွေစင်းလာပီး ပိပိလေးကတအားယွလာတယ်လေ။ကိုမိုက်ကယ်ကကျ မကိုတွဲပီးဟိုတယ်ခန်းထဲခေါ်လာတာပါပဲ။
သူက ကျွန်မကို အိပ်ယာပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ကျွန်မ ကိုယ်ပေါ်မှာ အနက်ရောင်အတွင်းခံ ဝမ်းဆက် လေးကလွဲ ပြီး ဘာမှမကျန်တော့ ။ သူ့ကိုယ်ပေါ် မှာလဲ အားကစားဘောင်းဘီတိုလေးတစ်ထည်တည်း ဝတ်ထားတော့သည်။ သူက ကျွန်မလည်တိုင်ကို ဖွဖွ နမ်းရင် bra ချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်သည်။ ဖြူဖွေး ဝင်းမွတ်ပြီး ဆူဖြိုးလှတဲ့ကျွန်မရင်သားတွေက အကာအကွယ်မဲ့ ပေါ်လာသည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မနို့အုံကြီးတစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်း ချွန်ချွန်လေးကို ငုံစို့လိုက်သည်။ နောက်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မ ဝမ်းဗိုက်ပေါ်ပွတ်သပ်ရင်း အောက်ကို ဆင်းသွားသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးနား ရောက်လာသည်။
ဘောင်းဘီအောက်ထဲ လက်ကို နှိုက်လိုက်သည်။ လက်ချောင်းလေး နှစ်ချောင်းနှင့် ကျွန်မရဲ့အကွဲကြောင်းလေး တစ်လျှောက်ပွတ်သပ်ရင်း အပေါက်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ထိုးလိုက်သွင်းလိုက် မှန်မှန်လေးလုပ်ပေးနေရင်း ကျွန်မ အဖုတ်ကစိုရွှဲ လာပြီး ခဏကြာတော့ ပြီးသွားသည်။ ” မို့လေး ပီးသွားတဲ့ပုံစံ လေးက သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ “ ကျွန်မက တအင်းအင်း ညည်းရင် သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီတိုကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ သူကလဲ ကျွန်မအတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ကျွန်မပေါင်နှစ်ဖက်ကြားမှာနေရာ ယူပြီး သူ့ဟာကြီးကို ကျွန်မ အဖုတ်ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ ပထမတော့ ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်နေသည်။ ခဏကြာတော့ ပိုမြန်လာပြီး ဆောင့်ချက်တွေကအားပါလာသည်။ သူဒုတ်ကြီးကကျွန်မ အဖုတ်ကြီးထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လှုပ်ရှားနေသည်။ သူညည်းတဲ့ အသံ ကျွန်မ ညည်းတဲ့အသံ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းထွက်လာတဲ့ တဖုတ်ဖုတ် တဖက်ဖက် အသံတွေ ဆူညံနေသည်။
သူက ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပေးနေသည်။ ခံရတဲ့ ကျွန်မက အီဆိမ့်နေအောင် အရသာရှိလှသည်။ ” … ပြင်းပြင်းအိုးးမောင် ပြင်းပြင်းလေးဆောင့် … အင်းး အင်း “ သူ့ဟာကြီးကို ကျွန်မထဲ တဆုံးဆောင့်ချလိုက်သည်။ ကျွန်မ အသက်ရှူတွေမှားလာသည်။ ခေါင်းကိုနောက်ကို လှန်ချပြီး ခါးကိုကော့ကာ အမောတကောပြောသည်။ “ထိုးထည့်လိုက်စမ်းပါ … မောင့်ဟာကြီးကို ကျွန်မထဲ ပြင်းပြင်းထိုထည့်ပေးစမ်းပါ” ကျွန်မက အသေအော်နေသည်။ သူက သူ့ဟာကြီးကို ပြန်ထုတ်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်မပါင်ကြားထဲအပ်လိုက်သည်။
ကျွန်မရဲ့ စိုရွှဲနေတဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် သူ့ရဲ့လျှာနဲ့လျက်ပေးသည်။ကျွန်မက သူ့ခေါင်းကိုပေါင်ကြားထဲအတင်းဖိချသည်။ သူက ကျွန်မပေါင်နှစ် ဖက်ကို ဘေးကို တွန်းကားလိုက်ပြီး ကျွန်မအစိလေးကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့ဆွဲစုပ်ရင်း လက်ချောင်းနဲ့ အဖုတ်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ခပ်မြန်မြန် ခပ်ပြင်း ပြင်းထိုးထိုးထည့်သည်။ ခဏကြာတော့ သူ့လက်ချောင်းကို တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြီးသွားပြန်သည်။ ကျွန်မအဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး ပူနွေးစိုရွှဲ နေသလိုခံစားရသည်။ သူက ကျွန်မကို ဆွဲ မှောက်လိုက်သည်။ ကျွန်မ ဖင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြဲပြီး သူ့ဒုတ်ကြိးကို ကျွန်မ ဖင်ပေါက်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်မနောက်ကျောပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး ကျွန်မနို့အုံကြီးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်နေသည်။ သူဒုတ်က ကျွနိမဖင်ထဲကို တအားဆောင့်ပေးနေသည်။
ကျွန်မက တအင်းအင်း အော်ဟစ်နေသည်။ ကျွန်မဖင်ထဲက သူ့ဒုတ်ကြီး ကိုထုတ်လိုက်သည်။ ကျွန်မက လှည့်ပြီး သူ့ကို အိပ်ယာပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်သည်။ သူက ကျွန်မကို အဓိပ္ပါယ်ပါပါပြုံးပြသည်။ ကျွန်မ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ သူသိသည်။ ကျွန်မက သူ့မျက်နှာပေါ်ပြောင်းပြန်တက်ခွလိုက်သည်။ ကျွန်မအဖုတ် ကြီးကို သူ့မျက်နှာပေါ်ဖိချလိုက်သည်။ ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းက သူ့ဒုတ်ကြီးရဲ့ထိပ်ကို ငုံလိုက်သည်။
သူက ကျွန်မ အဖုတ်တလျှောက်လျက်ပေးပြီး နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ဆွဲစုပ်ပေးပြန်သည်။ သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကျွန်မပါးစပ်နဲ့ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် အသွင်းအ ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။ ပါးစပ်တွေ ထူပူပြီး အာတွေညောင်းလာသည့်တိုင်အောင်သူ့ဟာကြီးကိုစုပ်ပေးရတာ မရပ်ချင်လောက်အောင်အရသာရှိလှသည်။ သူက ကျွန်မကို အိပ်ယာပေါ်ပြန်ဆွဲလှဲလိုက်သည်။ သူကအပေါ်ကပြန်ရောက်သွားပြီ။ သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကျွန်မရဲ့ပူနွေးစိုရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ ပြန်ထိုးထည့် ပြန်သည်။ နက်သထက်နက်အောင် မြန်သထက်မြန်အောင် ပြင်းသထက်ပြင်းအောင်ဆောင့်ပေးနေသည်။ အဖုတ်ထဲက နာကျင်နေပေမဲ့ ရပ်ချင်စိတ်မရှိ။ အသံကုန်သာအော်ဟစ် ညည်းညူနေသည်။
“အိုးး .. မို့ကို စိတ်ကြိုက်လုပ် .. စိတ်ကြိုက်သာလိုးစမ်းပါ “ နာကျင်နေလျက်ကပင် တအားကောင်းနေသည်။ သူက အားကုန်ဆောင့်ပေးနေသောကြောင့် ခုတင်ကြီးတစ်ခုလုံး လှုပ်ခါနေသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်အောက်တွင် ခုတင်ကြီး တဒုန်း ဒုန်းမြည်နေသည်ကိုကြားရသည်။ သူ့ဒုတ်ကြီးက ကျွန်မ အဖုတ် ထဲ ထည့်ထားရက်နှင့် သူကကျွနိမကိုဆွဲထူပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်မထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်မကိုဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်မဖင် ပေါက်ထဲ ပြန်ထိုးထည့်သည်။ ကျွန်မကို မတ်တပ်ရပ်လျက် ဖင်လိုးနေသည်။ ကျွန်မက အားမလိုအားမရနှင့် ဖင်ကို ကုန်းပေးသည်။ “ပြင်းပြင်းဆောင့် “ သူက ကျွန်မပြောလိုက်တာနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်တော့သည်။ နှစ်ယောက်လုံး ကျေနပ်အားရစွာ အော်ဟစ်နေသည်။ သူက ကျွန်မကို ခုတင်ပေါ်ကို ပစ် တင်လိုက်သည်။
ကျွန်မက ခုတင်ပေါ်ကိုမှောက်ရက်ကျသွားသည်။ ကျွန်မ နို့နှစ်လုံးက အိပ်ယာဘေးကိုလျှံထွက်နေသည်။ သူက ကြုံဖူးသမျှထဲမှာ အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ ကျွန်မကို ဆောင့်ပေးနေသည်။ ခဏကြာတော့ သူနှေးသွားသည် သူပြီးသွားပြီထင်လို့ ကျွန်မစိတ်ပျက်သွားသည်။ ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပင် ကျွန်မကို ပြန်ဆွဲလှည့်ပြီး အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြန်သည်။ တချက်တည်း အားကုန်အဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်သည်။ တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် တခါမှဒီလောက်မ နာဖူး .. ဒီလောက်ကောင်းတာလဲတခါမှမကြုံဖူး … သူက ပြင်းပြင်း မြန်မြန်ဆောင့်နေပြန်သည်။ ကျွန်မခေါင်းကနောက်ကို လန်နေပြီး အသက်ကိုမနည်းရှူ နေရသည်။သူက နောက်ဆုံး တရစက်ဆောင့်ရင်း ကျွန်မအဖုတ်ထဲကို ပူနွေးပျစ်ချွဲတဲ့သုတ်ရည်တွေ ပြည့်လျှံနေအောင် ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်။
ပြီးတော့ သူ့ဒုတ်ကြီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဆွဲထုတ်သွားသည်။ သူက ကျွန်မခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲပြီး ခုတင်ပေါ်ကတွဲလောင်းချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ငုံ့လိုက်ပြီး သုတ်ရည်တွေပေပွနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကို လျှာနဲ့ ပြောင်အောင်လျက်ပေးပြန်သည်။ သူ့လျှာနဲ့ အဖုတ်ထဲကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ် ပေးသည်။ ကျွန်မက သူ့ဆံပင်ကိုဆွဲဆုပ်ပြီး သူ့မျက်နှာကို ကျွန်မအဖုတ်နှင့် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ပွတ်နေသည်။ အဖုတ်တခုလုံး ထူပူကျိန်းစပ်နာကျင်နေသော်လည်း မကြုံဖူးအောင် ကောင်းတဲ့အရသာကြောင့် သာယာကျေနပ်စွာ တီးတိုးညည်းနေသည်။
ဘယ်လောက်ကြာသွားမှန်းမသိ .. သူ့မျက်နှာကို ကျွန်မအဖုတ်ဆီက ဖယ်လိုက်သည်။ သူက အရည်တွေထုတ်ပြီးလို့ပျော့သွားတဲ့သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကျွန်မမျက်နှာဆီကပ်လာပေးသည်။ ကျွန်မက အလိုက်သိစွာ အရည်တွေပေပွနေတဲ့ ဒုတ်ကြီးကိုငုံစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ဥနှစ်လုံးကို လဲ တစ်လှည့်စီ ငုံစုပ်ပေးသည်။ စုပ်ပေးနေရင်း ခဏကြာတော့ သူ့ဒုတ်ကြီးက သံချောင်းကြီးလိုပြန်ပြီး မာတောင့်လာပြန်သည်။ နောက်တခါအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ … သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကျွန်မပါးစပ်ထဲကထုတ်လိုက်သည်။ ကျွန်မတံတွေးတွေကြောင့် ပြောင်လက်နေသည်။ သူက ကျွန်မခြေနှစ်ချောင်း ကို ဆွဲကားလိုက်ပြီး သူ့ဒုတ်ကြီးကို ကျွန်မအဖုတ်ကြီးမှာတေ့ကာ ဆောင့်ချလိုကိပြန်သည်။ အခန်းထဲမှာ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်အသံတွေ ပြန်ပြီးဆူညံသွားပြန်လေတော့သည် ။
ကျမအိပ်ရာနိူးတော့အရာရာတိုင်းဟာအိမ်မက် အိမ်မက်မဟုတ်တာတော့သေချာတဟိလေ။ ကျမဘေးမှာအိပ်မောကျနေတဲ့ကိုမိုက်ကယ် ပီးတော့ကျမပိပိ လေး ထဲကအန်ကျနေတဲ့ သုက်ရည်တွေရယ်တွေ့လိုက်ရလို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့မကြာခဏခိုးတွေ့ရင်း ကာမအရသာကိုအတူခံစားခဲ့တယ်လေ။ ရလဒ်ကတော့အခု ကျမ မှာကိုမိုက်ကယ့်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပီလေ။ဒါကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေဖို့ ကျမယောက်ျားဆီလိုက်ပီး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဒုတိယမွောကျရငျခုနျသံ